2021 Gold Standard DAT Review [What Others Won't Tell You]
updated:Jan. 23, 2021
1. Software Exam-isku
2. Comprehensive Muuqaal Resource
3. Practice Su'aalaha
4. Wararka falanqaynta
5. halleeyo lillaahinimada
7. Qalabka Tayada
8. Mini DAT Free Practice Test
9. Kala duwan oo ka mid ah hababka waxbarasho
11. Adeegga macaamiisha
1. ma Cheap
2. Supplemental Study Waxyaabaha laga yaabaa in loo baahan yahay
3. Chemistry organic
Gold Standard DAT Course Options
1. DAT ee Xidhmada Buuxi ($500)
2. DAT ee Xidhmada aan TopScore waxyaabaha bonus / ($400)
3. DAT Buuxi 4-Book Set ($200)
DAT Qalabka Individual
1. The Gold Standard DAT Book Biology ($50)
2. Gold Standard DAT Guud iyo Organic Chemistry Book ($50)
3. The Gold Standard DAT PAT Book ($50)
4. The Gold Standard DAT tiro ahaaneed Sabab iyo Reading fahamka Book ($50)
5. Gold Standard Video DAT Science Review The ($200)
6. The Gold Standard Full-Length Practice Tests ($60)
7. TopScore Pro-Length Full Practice Tests ($55)
8.Waraysi School Medical + mmi DVD ($30)
9. The Gold Standard DAT Science Review Flashcards (DAT Diyaarinta) mobile APP ($10)
1. Canadian DAT ee Xidhmada Buuxi ($438)
2. Canadian DAT ee Xidhmada aan waxyaabaha Pro / bonus TopScore ($350)
Gold Standard Review DAT burburka
Shirkada Gold Standard ayaa magac weyn in industry MCAT muddo ka badan toban sano, laakiin waa ku cusub in industry ee udiyaarin DAT. Inkasta oo ay ku cusub kulanka DAT ah, waayo aragnimo la wareejinta MCAT ka badan dunida ilkaha.
waxay Dabcan dib u eegis Gold Standard DAT, kaas oo la sii daayay 2013, isticmaalaa hab multimedia ku lug buugaagta, videos, iyo MP3 formatted dib u eegista in ardayda la siiyo dib u eegis dhamaystiran oo ka mid ah wax walba oo ay u baahan tahay in la ogaado, waayo, DAT ah. Dabcan waxa uu ka koobanyahay oo kaliya waxa ay tahay lagama maarmaan u ah DAT ah, laakiin waxa ay deyn iyo daryaa aqoonta qaybaha sayniska MCAT ee ka.
Waxa aan ku jeclahay iyo mahad ugu saabsan The Dabcan dib u eegis Gold Standard waa ay xog ku bandhigidda iyo waxbarashada. In dhammaan dhinacyada Dabcan dib u eegis ay, waa ay awoodaan in ay soo bandhigaan macluumaadka ku jira hab fudud oo cad in la sameeyo fahamka iyo barashada sahlan.
imtixaanada dhaqanka iyo thay waxaa lagu soo bandhigay qaab la mid ah computer aad arki doontaa maalinta imtixaanka, oo ay ku jiraan xadka waqtiga ku haboon, siyaasadaha fasaxa, iyo xeerarka u dhaqaaqo iyada oo loo marayo content imtixaanka. Tani waxay aad familiarizes la format ku Test Admission ilkaha iyo waxay ka caawisaa dhisi aad ku kalsoonaan karto si aad u burburin doonaa maalinta imtixaanka dhabta ah ee aad.
The set buugga Gold Standard, la 1408 bogagga macluumaadka, daboolayaa mawduuc kasta oo noqon doona on DAT ah. set Buugani wuxuu kaa caawin doona inaad la dhiso aasaas adag qaybta kasta oo Baaritaanka Admission ilkaha iyo sidoo kale u adeegtaan khayraad si loo eego in ay waxgarashada. Tani waa khayraadka weyn ah in si wanaagsan waad u adeegi doontaa in waxbarashada. The Gold Standard Sciences Dabiiciga Video Review, oo ay la socdaan MP3 faylasha, caawin siiyaan dib u eegis multimedia dhamaystiran oo wax for DAT ah.
Iyadoo in ka badan 3,000 dhaqanka iyo su'aalo 5 imtixaan dhererka buuxa, waxaad yeelan doontaa badan oo dhibaatooyin si ay u xalliyaan oo wax ka baro format in aad arki doontaa DAT dhabta ah. Waxaan jeclahay sida ay u ka mid ah dhowr su'aalo ah oo ku dhaqan ka dib markii cutubka kasta ee The Standard buugga Gold. Sidaas, waxaad eegi kartaa fahamkaaga ka dib markii dib u wax. Waxay sidoo kale waxaa ka mid ah xal u su'aal kasta oo dhaqanka, taas oo muhiim u ah waxbarashada iyo waxgarasho.
Wararka Falanqaynta ahaan imtixaan kasta dhaqanka aad qaadato iyo caawimo si ay u aqoonsadaan meelaha aad ugu liita iyo sida ugu wanaagsan ee ay ula qabsadaan aad diyaarinta si loo sare qaado tirooyinka aad. Waxay u falanqeeyaan qayb kasta oo baaritaanka nooca su'aasha iyo siiyaan falanqeyn dhameystiran qaab.
Waa maxay run ahaantii ii soo bandhigay ee ku saabsan Standard Gold The tahay awooddiisa ah inuu soo bandhigo oo wax bari doonaa macluumaadka ku jira hab fudud oo ka dhigaya in ay u fududahay in la fahmo oo la raaco. Waxay bixisaa sharaxaad dhamaystiran oo ku saabsan wax kasta si aad marnaba ka tagay mugdi ah. Waxa kale oo uu leeyahay qalab ay dib u eegis iyo dabcan damacsan baxay hab fudud waa u fududahay in la raaco. In my opinion this waa xirfad ugu adag in ay ka adkaadaan waxbarashada iyo Standard Gold ayaa qabtay shaqo aad iyo aad u wanaagsan at siibi hoos fikradaha iyo wax adag oo u soo bandhiga hab fudud.
Waxaa jira xeelado imtixaanka-qaadashada wax ku ool ah dhowr qaybaha DAT ee DAT Buuxi 4-Book Set. Waxay bixisaa xeelado kala duwan oo qaybaha si aad ka heli karto istaraatijiyad kuu shaqeeya.
buugaagta waa tayo sare iyo dhigtay qalabka waara u adkeysan doonaa maraan caadi ah waxbarashada muddo dheer. buugaagta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah tayada images midabka buuxa iyo muuqaallo kale. print wuu weyn yahay oo si sahlan loo akhrin taas oo ka dhigaysa saacadood ee barashada sahlan on indhaha iyo jidhka.
Waxaad qori kartaa online in ay qaataan Practice Test online Mini DAT ah oo lacag la'aan ah. Waxaan ku talinaynaa lahaa sameeyo ka hor waxaad bilowday waxbarashada si aad u arki kartaa sida ugu wanaagsan ee aad samayn iyo in la garto waxa meelaha aad u baahan doontaa in la hagaajiyo. U badan tahay, waxaad yeelan doontaa in la hagaajiyo ee meel walba oo, laakiin aad ugu yaraan qaadan kartaa imtixaanka barbarashada ee lacag la'aan ah sida tijaabada cudur-aqoonsiga si ay u leeyihiin saldhig ah in aad is barbardhigi kartaa ka dhanka ah.
Imtixaanka barbaradka waa ⅓ dhererka imtixaanka dhaqanka dhererka buuxa, laakiin waxay bixisaa software jilidda DAT dhabta ah, sharaxa, iyo Dhibcaha DAT deg dega ah. No downloads loo baahan yahay oo waa la jaan qaada labada PC iyo MAC. threads Forum marayo website Gold The Standard-ka waa la heli karo la imtixaanka barbaradka ah si ay ugala hadlaan xal.
Iyada oo noocyo kala duwan oo qalab laga heli karo noocyada kala duwan ee warbaahinta, Standard Gold waxa uu ka dhigayaa suurto gal ah ee nooc kasta oo bartaha inay tacliin qaataan hab iyaga u adeegaa ugu fiican; haddii taasi by buugaagta akhriska, daawashada cajaladaha, ama dhagaysto files audio.
All of maaddadu ay marka laga reebo buugaagta, DVDs, iyo flashcards waxaa laga heli karaa online - buugaagta ee, DVDs, iyo flashcards loo soo diri doonaa in aad. software kaliya ee loo baahan yahay si ay u soo bixi waa TopScore software Pro. Qoraalkani wuxuu dib u eegis online marayo Standard Gold ayaa si fudud waa la heli karo online taas oo macnaheedu yahay in aad ka heli kartaa wax meel kasta in uu jiro internetka.
Gold Standard waa waqtiga iyo waxtar leh adeegga macaamiisha iyo ma shaqo weyn guud. tayada adeega macaamiisha shirkadda waa mid muujisa ee shirkadda iyo wax soo saarka guud ahaan in my opinion. Waxaan oonu lahaa in shirkad tayo sidaan oo kale ah ku siin doonaa wax soo saarka oo tayo leh in aad ku kalsoon tahay kartaa.
The DAT ee Xidhmada Buuxi khasab ma aha in cheap, laakiin waqti isku mid ma aha sida qaali ah sida qaar ka mid ah koorsooyinka kale dib u eegis dhamaystiran.
Standard Gold ayaa ku siin kara oo leh aasaas adag, waayo Baaritaanka Admission ilkaha oo awood u leh in kaa caawiyaan in aad ku gaarto 20+ Dhibcaha on dhammaan qaybaha DAT ah; si kastaba ha ahaatee, haddii dhibcaha dhaqanka aysan u sarraysaa sida aad rabto in aad lahayd, ka dibna qalabka dheeraadka ah iyo su'aalaha dhaqanka waa kuwa mar kasta waxtar leh iyo qalab dheeraad ah ka caawin kara ka dhigi aad wax dheeraad ah iyo sidoo kale-fekrado iyo si wanaagsan isugu diyaariyeen ka DAT.
The qaybta Organic Chemistry ee The Gold buugga Standard ayaa laga yaabaa inuu ka fiican oo aan ka mid ah wax su'aalo ah oo dhaqanka. Waxay ahaayeen awoodaan in ay kor u la'aanta ah ee qalab iyo tababar su'aalo kitaabkii by bixinta su'aalaha dhaqanka online iyo wax dheeraad ah oo dib u eegis wanaagsan ee qaybtan.
Standard Gold waxay bixisaa koorso oo dhamaystiran iyo fududahay in la raaco dib u eegis. Waxaan u bogi ay xirfad at bandhiga iyo barayay macluumaadka ku jira hab sahlan oo fudud si ay u sameeyaan fahamka iyo barashada sahlan. Waxa ay dib loo eegay qaar ka mid ah waxyaabaha MCAT ay DAT ah, laakiin kaliya waxaa ka mid ah waxa ay tahay lagama maarmaan u ah DAT iyo sidaan u sameeyey shaqo si fiican ugu ma jiraan macluumaadka dheeraadka ah waa in aan loo baahnayn.
Si aad u leeyihiin wax u eegis DAT dhamaystiran oo ku filan qiimo ah la awoodi karo Waxaan u soo jeedin lahaa wax iibsiga ah DAT Buuxi 4-Book Set oo ay la socdaan dheeraad ah Waayo, Topscore imtixaan. Haddii aad jeceshahay inaad qabto videos dib u eegis dheeraad ah ka dibna waxaan u soo jeedin lahaa labada iibsiga Times hal bil ah helitaanka aan xad lahayn in ay online videos.
Waxaan aaminsanahay in arday kasta la filan diyaariyey lahaa DAT la Dabcan dib u eegis this, laakiin sida Dabcan dib u eegis kasta oo ay jiraan qaar ka mid ah meelaha daciif ah. Uma maleynayo lahaa ee wax u eegis in koorsadan ee Survey qaybta culuunta dabiiciga ah sida khayraadka kama dambaysta ah ee isku diyaarinaya DAT dhabta ah, laakiin weli waxaan dareemay sida ay ahayd khayraadka wanaagsan inay isticmaalaan. Haddii aad aan arkayn sida sare ee dhibcaha sida aad jeclaan lahayd in qaybtan ka dibna waxaan soo jeedin lahaa dheeraad ah oo waxbarashada ka qalab dheeraad ah sida: Chad ayaa Videos waayo, qaybaha Chemistry ah, CliffsNotes qaybta Bayolojiga, ama J Co Review waayo, cilmiga oo dhan.
Ii geyso HEERKA dahabka!
Standard Gold wuxuu bixiyaa saddex baakadaha Dabcan dib u eegis DAT kala duwan iyo sidoo kale fursad u iibsadaan qalabka si gaar ah. Dhammaan saddex baakadaha ku jira qalab ku filan si fiican loogu diyaar garoobo DAT ah, laakiin kaliya DAT ee Xidhmada Buuxi siinayaa wax kasta oo The Gold dalabyo Standard. Labada kale ee baakadaha yar imtixaan dhererka buuxa oo la la'yahay qalabka dib u eegista iyo qalabka gunno gaar ah oo dhamaystiran. Aynu eegno at baakadaha oo la arko waxa ay ka kooban yihiin:
The DAT ee Xidhmada Buuxi bixiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si ay u diyaariyaan DAT iyo sidoo kale aad wareysiyo dugsiga ilkaha. Waxay bixisaa dib u eegis dhamaystiran multimedia la buugta, DVDs, iyo MP3s. Waxaa ku jira waxyaabaha bonus sidoo for ilaha waxbarasho dheeraad ah oo kaa caawinaya in aad diyaariyo wareysiga dugsiga ilkaha. Xirmadan waxaa ku jira soo socda:
Gold Standard DAT Buuxi 4-Book Set The leh helaan shakhsi code online for wax tababar dheeraad ah iyo 2 dhererka buuxa imtixaanka barbarashada ee Internetka xal faahfaahsan. Waxaa jira in ka badan 3000 dhaqanka su'aalo ah ee buugaagta iyo internetka.
TopScore Key License Pro in lagu furo TopScore soo bixi software online Pro for dheeraad ah 3 imtixaan dhererka buuxa.
Gold Standard Dabiiciga Sciences Video Review oo uu ku jiro 15 saacadood oo dib u eegis ku 12 DVDs.
Saddex saacadood oo kooban MP3 dib-dhibcood weyn ee qaybta culuunta dabiiciga ah. MP3 files yihiin via email gudahood 1 maalin shaqo.
Waraysi School Medical + mmi DVD: 100 min DVD oo loo isticmaali karo si ay uga caawiyaan diyaariyo waraysiyada dugsiga ilkaha.
sharraxaa A ka buuxa 54 flashcards MCAT dib u eegis dheeraad ah (iska indha kaararka Physics ah).
xirmo DAT Tani waxay bixisaa wax dib u eegis dhamaystiran oo si ay kuu diyaariyaan DAT ah. Waxay bixisaa dib u eegis dhamaystiran multimedia la buugta, DVDs, iyo MP3s. Waa kuma jiraan TopScore dheeraad ah imtixaanada dhaqanka Pro ama waxyaabaha bonus ka DAT ee Xidhmada Buuxi. Xirmadan waxaa ku jira soo socda:
xirmo DAT Tani waxay bixisaa wax dib u eegis dhamaystiran oo si ay kuu diyaariyaan DAT ah. Waxay bixisaa dib u eegis dhamaystiran oo leh buugaagta iyo helitaanka videos online baridda. Waa kuma jiraan DVD-, MP3s, TopScore imtixaan Pro, iyo sidoo kale waxyaabaha bonus ka DAT ee Xidhmada Buuxi. Xirmadan waxaa ku jira soo socda:
Gold Standard DAT Buuxi 4-Book Set The leh helaan shakhsi code online for wax tababar dheeraad ah iyo 2 imtixaan dhererka buuxa xal faahfaahsan — 1 jiid-out imtixaanka kitaabkii lagu daray 1 la taaban karo online DAT. Waxaa jira in ka badan 3000 dhaqanka su'aalo ah ee buugaagta iyo internetka.
Online helitaanka 10 saacadood oo videos waxbaridda ka Sciences Dabiiciga Video Library Gold The Standard-ka.
The buugga Biology Gold Standard DAT ku jira dib u eegis dhamaystiran ee wax Biology ee lagama maarmaanka u ah DAT ah. Cutubyada bilaabaan oo leh ujeeddooyin waxbarasho oo ku dhammaadaan su'aalo doorashada dhaqanka kala duwan. Buugani wuxuu ka kooban yahay 319 dhaqanka su'aalo iyo helitaanka 57 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan.
The Gold buugga Standard DAT Guud iyo Organic Chemistry ku jira dib u eegis dhamaystiran ee wax Chemistry ee lagama maarmaanka u ah DAT ah. Cutubyada bilaabaan oo leh ujeeddooyin waxbarasho oo ku dhammaadaan su'aalo doorashada dhaqanka kala duwan. Buugani wuxuu ka kooban yahay 130 dhaqanka su'aalo iyo helitaanka 151 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan ee qaybta General Chemistry. Buugani wuxuu ka kooban yahay 0 dhaqanka su'aalo iyo helitaanka 373 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan ee qaybta Organic Chemistry. Liiska isla'egta iyo miisaska ku jira buugga ee qaybta General Chemistry. hababka reaction Organic Chemistry Key ku jiraan iyo sidoo kitaabkii.
The Gold buugga Standard DAT PAT ku jira dib u eegis dhamaystiran ee wax PAT for DAT ah. Waxa kale oo ka mid ah: macluumaadka la xiriira ogolaanshaha dugsiga ilkaha oo ay ku jirto sidii loo hagaajin aad derejada tacliinta; macluumaad ku saabsan DAT ee ay ka mid yihiin qaab-dhismeedkooda iyo wadadii guusha DAT; iyo macluumaadka la xiriira wareysiyo dugsiga ilkaha oo ay ku jiraan su'aalo wareysi dugsiga ilkaha muunad. Buugani wuxuu sidoo kale ku jira xeelado qaadashada imtixaanka for DAT iyo sidoo kale PAT ah oo ay la socoto dib u eegis cutubka su'aalo iyo 1 jiid-out Imtixaanka dhererka buuxa (Sudee 1 Test). Buugani wuxuu ka kooban yahay 90 dhaqanka su'aalo iyo helitaanka 1,340 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan.
The Gold buugga Standard DAT tiro ahaaneed Sabab iyo Reading fahamka ku jira dib u eegis dhamaystiran oo ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah QR iyo RC qaybaha DAT ah. Buugani wuxuu ka kooban yahay asaaska Sabab u tiro ahaaneed iyo sidoo kale dib u eegis cutubka su'aalo. Waxaa jira 78 dhaqanka su'aalo in kitaabka iyo helitaanka 80 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan qaybta QR ah. The qaybta Reading fahamka waxaa ka mid ah sharaxaad ku saabsan qaab dhismeedka qaybtan iyo talooyin ku saabsan sida si loo hagaajiyo xirfadaha RC aad. Waxa kale oo ka mid ah xeeladaha qaybta RC iyo sidoo kale dib u eegis cutubka su'aalo. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 100 dhaqanka su'aalo iyo helitaanka 400 dhaqanka su'aalo online xal faahfaahsan qaybta RC ah.
The Gold Standard Video DAT Science Review DVD ku jira dib u eegis dhamaystiran oo ah waxyaabaha la daboolay on the Survey qaybta culuunta dabiiciga ah ee DAT ah. Tani 12 set DVD ku jira 15 saacadood oo cashar edbinta style iyo sidoo kale qorshe waxbarasho DAT a. Waxaa jira 4 DVD-maado kasta sayniska daboolay on the Survey qaybta culuunta dabiiciga ah. DVD-yada waxaa lagu ciyaari karo ciyaaryahan DVD joogto ah, laptop, ama desktop la drive DVD ah. dajinta No loo baahan yahay. DVD-yada ayaa waxaa loogu talagalay MCAT ah, laakiin baakadeeyey for DAT ah. qaybaha cilmiga la mid ah u dhexeeya DAT iyo MCAT yihiin, laakiin Standard Gold ayaa xaqiijiyey in DVDs u daboolaan oo wax kasta oo lagama maarmaan u ah cilmiga ku DAT ah.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa videos cilmiga on DVD ah iyada oo loo marayo website The Gold Standard meesha aad ka iibsan kartaa Times bil aan xad lahayn u helaan iyaga u $ 40 / bishii. Online helidda xad waxaa sidoo kale la siiyay gadashada ee DAT ee Xidhmada Buuxi sidoo kale Xidhmada DAT oo aan waxyaabaha Pro / bonus TopScore. Waxaad heli kartaa 10 saacadood oo arkaysid helitaanka videos online gadashada ee DAT ee Buuxi 4-Book Set. Qaar ka mid ah shaqsi videos la huleeshay kartaa lacag la'aan ah halka kuwo kale laga iibsan karaa $3 oo waxay kor ugu qiimaha.
The Gold Standard Full-Length Practice Tests: Sudee 1 iyo Sudee 2 waa labada imtixaan online la software jilidda DAT dhabta ah, sharaxaad jawaabo, iyo Dhibcaha deg dega ah. Sudee The 1 baaritaanka waa version online imtixaanka warqad ay kasoo baxeen ee The Gold buugga Standard DAT PAT. Sudee The 2 baaritaanka waa dhererka buuxa imtixaanka barbarashada ee Internetka ka mid ah la iibsaday DAT Buuxi 4-Book Set. imtixaan kasta laga soo iibsan karaa online for $30. Imtixaanada waxa la heli karaa ilaa 7 bilood ama 210 maalmood oo la jaanqaadaan PC iyo MAC labada. A imtixaanka free Mini Practice DAT taas oo ⅓ dhererka imtixaanka dhererka-buuxa ah si toos ah dari doonaa in aad xisaabta la iibka ah ee imtixaanka dhererka-buuxa ah. Sidoo kale waxaad heli doontaa 3 saacadood oo arkaysid in ay helaan Survey online of Sciences Dabiiciga ah videos aad iibsashada imtixaan dhererka buuxa.
The TopScore Pro Practice Full-Length Tests shaqsi laga iibsan kartaa tababar dheeraad ah. Saddex imtixaan dhererka buuxa la software jilidda DAT dhab ah waxaa ka mid ah gadashada this. codes Access for TopScore software Pro loo diri doonaa hal maalin shaqo gudahood. Waxaad soo celin karaa qaybta kasta oo imtixaan sidii ay marar badan aad rabto in aad inta aad muddo helitaanka 7 bilood ama 210 maalmood. software kani waa la jaan qaada labada PC iyo MAC. A imtixaanka free Mini Practice DAT taas oo ⅓ dhererka imtixaanka dhererka-buuxa ah si toos ah dari doonaa in aad xisaabta la iibka ah ee TopScore imtixaanada Pro. macaamil Tani waa celinayo. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan TopScore Pro click halkan.
The Waraysi School Medical + Mmi DVD waa a 100 DVD daqiiqadii in loo isticmaali karaa si ay gacan uga diyaariso wareysi dugsiga ilkaha. DVD wuxuu ka kooban yahay su'aalo wareysi dugsiga ilkaha muunad iyo talooyin wareysiga. A wareysi dugsiga ilkaha aad uula mid tahay wareysi dugsiga caafimaadka sidaas darteed tani waa matalaad wanaagsan ee waxa aad filan karto iyo sida loo diyaariyo, waayo,.
The Gold Standard app mobile waxaa laga heli karaa labada iPhone iyo Android Qalabka telefoonada gacanta. app wuxuu ka kooban yahay dib u eegis flashcards oo ka mid ah fikradaha DAT ee Biology ugu tijaabiyey, General Chemistry iyo Organic Chemistry. Waxay bixisaa 361 su'aalo DAT tayo sare leh in waxa loo qaybiyaa saddex qaybood: Aqoon, Inta badan Imtixaanka oo DAT 30. Buundooyinka waxa lagu badbaadi si aad ula socoto horumarkaaga iyo arimo la kala si ay u xusaan su'aalo adag tahay in dib loo eego ka dib. Codsiga waa in midabka la sawirrada si aad u samayso fikradaha adag fududahay in la fahmo.
Bonus: App Tani waxay sidoo kale ku jira 30 videos- ee dhammaan 3 maadooyinka sayniska (ka badan 2 saacadood ee total!) la style a waxbaridda cad.
Sidoo kale waxaa jira Chine gaar ah maado la iibsan karaa, waayo, $1.99 waayo, qayb kasta ee cilmiga ah — Biology, General Chemistry iyo Organic Chemistry.
Standard Gold waxay bixisaa laba baakadaha DAT gaar ah DAT Canadian ah. Waxay bixisaa a DAT Canadian Xidhmada Buuxi sidoo kale a DAT ee Xidhmada Canadian aan waxyaabaha Pro / bonus TopScore.
The DAT Canadian Xidhmada Buuxi bixiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si ay u diyaariyaan DAT Canadian ah iyo sidoo kale wareysiyo dugsiga ilkaha. Waxay bixisaa dib u eegis dhamaystiran multimedia la buugta, DVDs, iyo MP3s. Waxaa ku jira waxyaabaha bonus sidoo for ilaha waxbarasho dheeraad ah oo kaa caawinaya in aad diyaariyo wareysiga dugsiga ilkaha. Xirmadan waxaa ku jira soo socda:
Gold Standard DAT Buuxi 4-Book Set The leh helaan shakhsi code online for wax tababar dheeraad ah iyo 2 dhererka buuxa imtixaanka barbarashada ee Internetka xal faahfaahsan. Waxaa jira in ka badan 2500 dhaqanka su'aalo ah ee buugaagta iyo internetka.
Gold Standard Dabiiciga Sciences Video Review oo uu ku jiro 10 saacadood oo dib u eegis ku 8 DVDs.
Tani xirmo DAT Canadian bixisaa wax dib u eegis dhamaystiran oo si ay kuu diyaariyaan DAT Canadian ah. Waxay bixisaa dib u eegis dhamaystiran multimedia la buugta, DVDs, iyo MP3s. Waa kuma jiraan imtixaanada oo dheeraad ah TopScore dhaqanka Pro iyo sidoo kale waxyaabaha bonus ka DAT Canadian ah ee Xidhmada Buuxi. Xirmadan waxaa ku jira soo socda:
Waxaad ka iibsan kartaa oo dhan shan imtixaan dhererka buuxa laga heli karaa qiimo dhimis ah $115 halkii $125 haddii si gaar ah soo iibsatay. Shanta baaritaano ka mid ah laba imtixaan Gold Standard iyo sidoo kale saddex TopScore imtixaanada Pro.
The homepage xubin Gold Standard ku jira macluumaad waxtar leh sida: PIC DAT ah ee toddobaadka, video sayniska ee toddobaadka ah, su'aasha DAT ah ee maalinta iyo links kale oo talo soo jeedin. The links macluumaadka ku jira ee la xiriira: qorayo DAT ah, imtixaan ADA, kooban Organic Chemistry ah reactions, burburo dhibcaha DAT iyo dhibcaha celcelis ahaan dugsiyada ilkaha, iyo jadwalka waxbarasho DAT ah iyo talo. Macluumaadka on homepage ah waxaa laga heli karaa for free marka aad iska diiwaan koonto oo saxiixdo Practice Test Mini xorta ah.
website Gold The Standard-ka bixisaa madal online bulshada halkaas oo aad weydiin kartaa su'aalo iyo hesho taageero ka users kale iyo maamulayaasha site.
Shipping waa $5 halkii wax si United States qaaradda iyo Kanada. Shipping waa lacag la'aan haddii aad iibsatay guud ahaan waa ka badan $100. All items gudahood markab 48 saacadood yihiin inta u dhaxaysa 3-7 maalmood oo shaqo.
gadashada kasta oo ka Standard Gold waa celinayo, laakiin waxa ay yabooho in uu ku dadaalo in la xaliyo wax kasta oo arrimaha laga yaabaa in aad ka mid ah qalabka ay leeyihiin.
1. Imtixaanka Software isku mid
3. Practice Su'aalaha Caawinaya
4. Wajahadda fududeeyay
5. Adeegga Macaamiisha Great
6. Marka la eego Mini Free Practice Test
© copyright 2021 | CrushTheDATExam.com. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.